I-Luxury Penthouse ene-terrace ebanzi
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguNihad
I-Apartment ibekwe kumbindi wesixeko, iimitha ezili-100 ukusuka ekungeneni kwePannonian Salt Lakes kunye nepaki yeSlana Banja, kunye nemizuzu emi-2 yokuhamba ukusuka kwindawo ehamba ngeenyawo yedolophu, kunye neendawo zokutyela ezahlukeneyo.
Indawo inamagumbi okulala ama-2, igumbi lokuhlala eliqaqambileyo nelivulekileyo elinekhitshi kunye nendawo yokutyela, igumbi lokuhlambela elibanzi elineshawa, amagumbi ama-2 ewodrophu (enye ibekwe ekungeneni kwendlu, enye kwigumbi lokulala elikhulu), kunye negumbi lokuhlambela. . Ubungakanani obupheleleyo be-115 m2.
Eyona nxalenye ibalaseleyo yale ndlu yindawo enkulu, i-29 m2, enombono omangalisayo wePannonian Salt Lakes kunye nepaki yeSlana Banja.
Omabini amagumbi okulala anebhedi enkulu ekhululekileyo. Kwigumbi lokuhlala kukho i-sofa ekhululekile kakhulu.
Ikhitshi kunye negumbi lokuhlambela lixhotyiswe ngokupheleleyo kunye nazo zonke izinto eziyimfuneko ukuze uhlale ukhululekile.
Indlu ikwaxhotyiswe ngeTV enkulu enescreen esisicaba, iAir conditioning, kunye neWiFi yasimahla yazo zonke iindwendwe.
Indawo yokupaka kawonke-wonke ehlawulwayo iyafumaneka kanye ecaleni kwendlu (ii-Euro ezi-2.5 ngosuku) kunye neendawo ezimbini zokupaka zikawonke-wonke ezinkulu (ii-Euro ezi-2 ngosuku)
Kubhukisho lweendwendwe ezimbini sinika igumbi lokulala elinye kuphela, elinye igumbi likhona njengentlawulo eyongezelelweyo yesimboli.
Umbuki zindwendwe ngu- Nihad
Sifumaneka ngeWhatsapp okanye iViber
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Tuzla